Plugins maimaimpoana 7 hamita ny photoshop | Famoronana an-tserasera
Plugins maimaimpoana 7 hamita ny photoshop anay
Jose Angel | | sary, dia midika hoe
Na eo aza ny fifaninanana lehibe nandresen'i Adobe, ny fitaovana ampiasaina indrindra dia ny Photoshop. Ireo mpampiasa manam-pahaizana sy vaovao kokoa dia mitodika any amin'ilay programa nomen'ny rehetra anarana malaza indrindra. Izany dia noho ny habetsaky ny horonan-tsary sy fampianarana any, manomboka amin'ny fampidinana ny programa amin'ireo plugins ivelany. Izany dia mahatonga fandaharana mifaninana kokoa amin'ny famolavolana famolavolana.
Ary na dia Photoshop aza dia fitaovana manana fahaiza-manao lehibe ho an'ny famolavolana, misy plugins mameno azy. Ary ny sasany amin'ireo fitaovana ireo ve dia hanome anao loharano toy ny sary, lamba sns. Ireo endri-javatra ireo dia manolotra safidy maro karazana. Plus ny plugins dia manolotra fomba haingana hanitarana photoshop hanavotana fotoana. Inona no fomba tsara kokoa noho ny manao azy amin'ireto plugins maimaim-poana manaraka ireto.
2 Ink na Ranomainty
4 Mpaka sary virtoaly
7 Vokatry ny ON1 10.5
Ny mpamorona rehetra dia mila tahiry saryFa maninona no ferana izahay? Ity plugins ity Getty Images Mitady anao izy io ary manivana sary ilainao. Ho fanampin'izany, ity rindranasa ity dia tsy miasa ho an'ny Photoshop fotsiny, fa azonao ampiasaina amin'ny Illustrator sy InDesign ihany koa. Vantany vao vita ny tetikasanao iray manontolo ary vonona handray ny fankatoavan'ny mpanjifa afaka mahazo fahazoan-dàlana amboaran-tsary avo lenta isika. Amin'ity fomba ity dia hitahiry ireo sarinay ho an'ny asa-tanana kokoa isika.
Ink na Ranomainty
Amin'ny maha mpamorona antsika dia heverintsika fa izay rehetra mandefa asa dia hahatakatra. tonga lafatra. Noho izany, raha miasa ho an'ny mpamorona izahay, dia mino izahay fa ho fantatr'izy ireo ny tetikasanay ary ho tonga araka izay tadiavinay izany. Saingy hadinonay fa tsy mila mahatakatra ny asanay ny mpamorona. Toa antsika dia tsy azontsika ny fivoarany. Indraindray ny tsy fahampian'ny spec dia miteraka famoahana eo alohany tsy marina ary tsy mandeha araka ny nampoizina. Ny tinta dia famenony izay manampy anao hanome fampahalalana manan-danja fanampiny momba ny fanesoana anao amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ny takelakao, manomboka amin'ny typografia ka hatramin'ny vokany sy ny habeny.
Plugins marobe ho an'ny mpaka sary no tafiditra ao amin'ny Nik Collection, izany no antony anisany an'ity TOP ity. Nefa mbola bebe kokoa noho ny fahazoana ny Google. satria teo aloha dia tsy hanana toerana amin'ity lahatsoratra ity amin'ny vidiny 95 dolara. Androany, misaotra ny orinasa Google, maimaim-poana izany. Ny mahavariana dia nanaiky ny hanolotra ny tahiry amin'ny DxO ny mpikaroka fikarohana mba hiantohana ny fampandrosoana hatrany.. Ny URL fampidinana vaovao dia nikcollection.dxo.com fa mbola azo atao ny mampiditra an'ireto google.com/nikcollection amin'izao fotoana izao.
Mpaka sary virtoaly
Raha mpamorona endrika maika ianao, na mbola tsy azonao antoka ny fampiasana Photoshop mamorona sary namboarina, virtoalyPhotographer dia fomba haingana sy mahomby hahazoana endrika manara-penitra amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka. Ny safidy tsindrio sy-mandroso tsotsotra dia midika fa hanova haingana ny asanao loharano ianao, na dia tena ilaina kokoa aza izany ho an'ireo vao manomboka Photoshop noho ireo mpampiasa efa za-draharaha.
Ny pejy kisary quintessential manana extension ho an'ny Adobe. Fantatsika sahady fa miara-miasa amin'ny sary mihetsika sy ny montage Freepik izy ireo, noho izany dia tsy ho very ny loharanom-pahalalana. FlatIcon dia tahiry goavambe an'arivony misy kisary maimaimpoana an'arivony maro izay azonao sintonina amin'ny endrika SVG, PSD, na PNG. Ity plugin Photoshop maimaim-poana ity dia mamela anao hahita haingana ireo sary masina rehetra nefa tsy mamela ny tontolon'ny asanao, mampiditra azy ireo mivantana amin'ny volavolanao avy amin'ny tontonana.
Amin'ny alàlan'ny fiasana amin'ny fonosana Creative Suite manontolo, ity plugin ity Shutterstock manome fidirana mivantana avy amin'ny rindranasa mankany amin'ireo sary marobe hita ao amin'ny tranomboky Shutterstock. Mikaroha ao anaty Photoshop, kitiho raha mifantina sy mampiditra, ary manome alalana mivantana ho an'ny fandefasana asa mora kokoa. Tena manampy izany raha mampiasa sary maimaimpoana ho an'ny volavolantsika isika.
Vokatry ny ON1 10.5
Ity dia tranga iray hafa amin'ny fomba lasa maimaim-poana ny fangatahana iray aorian'ny vidiny lafo be. maso! Tsy merita no lazainay, fa ny miala amin'ny 60 euro ka hatramin'ny zero dia fiovana lehibe iray. Fitaovana ilaina hahitana vokatra haingana amin'ny sary. Na fitsaboana loko io, na manampy endrika na tabataba na sisin'ny famoronana.
Mbola misy maro hafa, fa ny maro amin'izy ireo dia manana vidiny, izay afaka manomboka amin'ny € 15 ka hatramin'ny 200 €. Amin'izao fotoana izao dia manana vitsivitsy azonao isafidianana maimaim-poana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Plugins maimaimpoana 7 hamita ny photoshop anay
Damian Martin G dia hoy izy:
Salama, maninona no milaza fa maimaim-poana ny NIK Collection raha fitsarana maharitra 30 andro monja io?
Valiny tamin'i Damian Martin G
3 Antony mahatonga ny fampiasana Wordpress ho hevitra tsara
Logo 5 izay mbola afa-maina amin'ny fanovana